Ibhulogi - I-Next Supply Chain
Kungani i-Nextschain ingcono?
I-Dropshipping ingelinye lamamodeli ebhizinisi aziwa kakhulu kulezi zinsuku.Izenzele yona njengomsebenzi obalulekile onokutshalwa kwezimali okuphansi nokuvumelana nezimo.Nokho, ukusetha isitolo se-inthanethi nokubonisa imikhiqizo yakho akwanele;ukukhushulwa kanye nokwaneliseka kwamakhasimende kudlala indima ebalulekile ukwenza noma yiliphi ibhizinisi liphumelele.
Omunye wabahlinzeki bebhizinisi abanjalo, osebenza njengenkundla ephumelelayo yokwethula ibhizinisi lakho lamahhala le-dropshipping kuwo wonke umhlaba yi-Nextchain.Ake sibheke izizathu ezenza i-Nextschain ibe yingqalabutho embonini yayo.
Ukukhetha okubanzi:I-Nextschain inezigaba ezahlukahlukene zabathengisi abasebenzisa i-Shopify APP, ebavumela ukuthi bakhethe ezinkulungwaneni zemikhiqizo ewinayo kukhathalogi yabo futhi bayengeze esitolo sabo.Kodwa-ke, kubalulekile ukukhetha i-niche ethile;uma umthengisi eyisiqalo, njengoba kusiza ukuthola ukuzethemba nokuhlaziya isidingo semakethe.Ngaphezu kwalokho, kunciphisa isici sobungozi futhi.
Ukuthengisa Nokumaketha:I-Nextschain ivumela abasebenzisi ukuthi bagxile engxenyeni yokuthengisa nokumaketha, njengoba ochwepheshe babo belawula i-inventory kanye nenqubo yokuthumela.Intengo yabo ye-wholesale ihamba phambili emakethe, okubavumela ukuthi bathole inzuzo ephezulu futhi bakhulise imali yabo engenayo.
Izinhlelo ezahlukahlukene:Njengomuntu oqalayo, wonke umuntu ufuna ukwethula ibhizinisi lakhe ngokutshalwa kwezimali okuphansi.I-Nextschain inohlelo lokuqalisa olumahhala.Nokho, uma abasebenzisi sebethole ulwazi;kuhle ukuthi uthuthukele ohlelweni olungcono ukuze uthole ulwazi olungcono kakhulu.
Izinketho zokuthumela:I-Nextschain ingomunye wabahlinzeki abambalwa abehlayo abathumela ama-oda ngobuningi emhlabeni wonke ngamanani athengekayo.Isistimu yabo yezinto ezihlakaniphile ilungisa ngokuzenzakalelayo futhi ithumele ama-oda kusenesikhathi phakathi nezinkathi zonyaka eziphakeme njengoLwesihlanu Olumnyama noma uKhisimusi ukuze ilethwe ngesikhathi.
Umthelela wenkundla yezokuxhumana:Inkundla yezokuxhumana ingesinye seziteshi eziphoqa kakhulu futhi inamandla okuthola ukuthengisa okwengeziwe nokwandisa inzuzo.I-Nextschain isiza abathengisi bezinhlelo zokusebenza bakwa-Shopify ngezikhangiso ezenziwe ngokwezifiso, eziqondile ze-Facebook kuyo yonke imikhiqizo esohlwini.Ngaphezu kwalokho, kubenza bakwazi ukukhuthaza nokuphatha ibhizinisi labo.
Ukwakha igama lomkhiqizo:Ngenxa yokuncintisana okukhulu, ukwakha igama lomkhiqizo kuye kwavela njengesinyathelo esibalulekile emabhizinisini.Nge-Nextchain, abasebenzisi bangaphrinta ilogo abazikhethele yona ebhokisini lokupakisha ukuze bagqame emqhudelwaneni.Ngenxa yalokho, abathengisi bangakha ukwethembana ngokuhamba kwesikhathi namakhasimende abo futhi bajabulele ukwethembeka okukhulu kwamakhasimende.
Amasevisi engeziwe:Abahlinzeki besevisi abaningi bayakhokhisa ngokuphrinta imininingwane yenkampani yomsebenzisi ku-invoyisi.I-Nextschain inika amandla i-invoyisi eyenziwe ngokwezifiso mahhala kuwo wonke ama-oda.Ngaphandle kwalokhu, uma kukhona izinkinga zekhwalithi ngomkhiqizo zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa, abasebenzisi bafanelekela ukubuyiselwa imali ephelele.
Ngenxa yalezi zici ezingenhla, i-Nextschain isivele njengenye yemikhiqizo ethenjwa kakhulu emakethe yomhlaba.Ukunakekelwa kwamakhasimende kwabo kunikeza isevisi engcono kakhulu yangemuva kokuthengisa.Ngokwakha ubukhona ku-inthanethi, kungenye yezindlela ezisheshayo zokuqalisa ngokutshala imali okuphansi.Ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zokwehla kwe-Nextschain, abasebenzisi bangagxila kukhwalithi kanye nekhwalithi futhi bathuthukise ibhizinisi labo.
Okugqamile kwe-NextChain Advantage
© Copyright 20102020: Wonke Amalungelo Agodliwe.